अर्थ व्यापार::Nepal's Digital Paper
सोमवार, माघ ६, २०७६ | Monday 20th January 2020
काठमाडौँ। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । शुक्रबार तोलामा ७४ हजार ८०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार बढेर ७५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी...
काठमाडौं । नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज (बिहीबार) भाउ स्थिर छ । हिजोकै मूल्यमा आज पनि सुनचाँदीको कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला ७४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको...
बढ्यो सुनको मुल्य, कति पुग्यो ?
काठमाडौं : मंगलबार प्रतितोला ८०० रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ बुधबार फेरि ७०० रुपैयाँले बढेको छ । मूल्य वृद्धि भएपछि बुधबार सुन तोलाको ७४ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, तेजावी सुनको भाउ पनि...
मङ्गलबार नेप्से साढे ७ अंकले ऋणात्मक
काठमाडौं, पुस २९ । मंगलबार सेयरबजारमा सामान्य गिरावट आएको छ पछिल्ला दिन उच्चदरले उकालो लाग्दै आएको सेयरबजारमा यसदिन भने सामान्य ‘करेक्सन’ आएको विश्लेषण गरिएको छ । कारोबार भने यसदिन पनि उच्च नै अर्ब बराबर रह्यो । उतार–चढावबीच...
विश्वकै सबै भन्दा सानो फोन तर सोच्ननै नसकेको प्रबिधि,नेपालमा आउदै !
बेलायतको स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जिनी मोबाइल्सले विश्वकै सबैभन्दा सानो आकारको थ्री जी स्मार्टफोन तयार गरेको छ । कम्पनीले यस स्मार्टफोनको प्रचार अभियानका लागि वेबपेज नै सुरु गरेको छ र त्यसमा फोनको मूल्य र डिजाइन लगायतका...
सुनको भाउ घट्यो , तोलाको कति पुग्यो त ?
काठमाडौं : सुन–चाँदीको भाउ मंगलबार पनि घटेको छ । मंगलबार छापावाला सुनको भाउ प्रतितोला ८०० रुपैयाँले घटेर ७४ हजार रुपैयाँ आएको छ । सोमबार छापावाला सुनको भाउ ७४ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको...
सुनको मूल्य घट्यो , तोलाको कति पुग्यो त ?
केही दिनदेखि लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य सोमवार घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आइतवारको तुलनामा सोमवार सुनको मूल्यमा २ सय रुपैयाँको गिरावट आएको छ । सोमवार नेपाली बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ७४ हजार...
सुनको मूल्य बढ्यो , तोलाको कति पुग्यो त ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुन प्रतितोला ४ सय र चाँदी प्रतितोला पाँच रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । प्रतितोला ७४...
सुनको मुल्य घट्यो , तोलाको कति पुग्यो त ?
काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको छ । बुधबार प्रतितोला ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको सुन बिहीबारदेखि ओरालो लाग्न थालेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको जानकारीअनुसार बिहीबार हजार रुपैंयाले घटेको सुनको...
आज सुनको भाउ घट्यो , तोलाको कति पुग्यो त ?
निरन्तर बढ्दै आएको सुनको सुनको भाउ आज घटेको छ। आज तोलामा एक हजारले घटेर ७५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो (बुधबार) प्रतितोला ७६ हजार ५ सय...